In The News Archives - MARGARET DONGO
Margaret Dongo questions President Robert Mugabe’s liberation war credentials, insists that the 92-year old Zimbabwean leader was merely a war prisoner.
Trailblazing Zimbabwean rights defender Margaret Dongo told Voice of America that the recent fire that gutted her house in the Ridgeview suburb of Harare in January is part of a years-long campaign to silence her.
Margaret Dongo is regarded as one of the “top 5 most influential” Zimbabwean politicians since 1980, alongside President Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai, Jonathan Moyo and the late Joshua Nkomo.
Margaret Dongo says liberation war veterans’ pervasive fear of President Robert Mugabe is allowing the nonagenarian leader to continue his misrule of Zimbabwe.
Margaret Dongo blames Zimbabwe President Robert Mugabe for the xenophobic riots and attacks currently taking place in nearby South Africa, which have claimed the lives of six people.
Daily News: Dongo savages panicky Zanu PF
Margaret Dongo says the Zimbabwe government’s renewed onslaught on the Daily News reveals Zanu PF’s “growing nervousness over its tyrannical hold on power in the country.”